Baarlamaanka Soomaaliya oo su’aalo waydiinaya wasiirka Dastuurka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Baarlamaanka Soomaaliya oo su’aalo waydiinaya wasiirka Dastuurka
Baarlamaanka Soomaaliya oo su’aalo waydiinaya wasiirka Dastuurka
Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta hor-tagaya Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, si su’aalo looga weydiiyo ka hor imaanshihiisa Go’aankii uu Baarlamaanka gaaray.
Arbacadii la soo dhaafay ayaa Mooshin lagu dalbanayay Wasiir Xoosh inuu hor-yimaado Baarlamaanka ayaa waxaa loo gudbiyay Guddoonka Baarlamaanka, iyadoo markii dambena uu Guddoonka uu ku wargeliyay Wasiirka in maanta oo Axad ah hor-yimaado Baarlamaanka.
Wasiir Xoosh ayaa fariin uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayaa ku tilmaamay go’aankii Baarlamaanka ay ku laaleen amarkii Maxkamadda sare inuu yahay mid sharci darro ah oo aanu Baarlamaanka awood u laheyn inuu jebiyo go’aan ay gaartay Maxkamadda sare.
Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa ka hor yimid go’aanka Maxkamadda sare ee ahaa in dib loogu celiyo doorashada 8-kursi oo muran la geliyay sharci ahaanshahooda.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Wasiir Xoosh laga yaabo inuu cudur daar ka bixiyo hadalkaas, inkastoo aan la ogeyn sida Xildhibaanada ugu qanci doonin.
Inta badan Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa taageeray go’aankii Baarlamaanka uu ku laalay amarkii Maxkamadda sare ee ahaa in dib loogu celiyo doorashada 8 kursi oo sharci ahaanshahooda muran la geliyay.
Maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo inuu soo fara geliyo khilaafka ka dhex qarxay Hey’addaha ugu sareeya dalka, maadaama uu yahay Ilaaliyaha Dastuurka
Khilaafka Hey’adda sharci dejinta iyo Hey’adda Garsoorka ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho madaxda dowladda, lama oga halka arrintan ku dambeyn doonto, maadaama Maxkamadda sare ay ku adkeysaneyso go’aankeeda.
Previous articleShirkii dowladda iyo AMISOM oo la soo gebagebeeyay
Next articleGoloha wasiirada cusub ee K/galbeed oo lagu dhawaaqay